Bayaanka Asturnaanta - Anshun AKF Medical Technology Co., Ltd.
Adiga iyo sumadda AKF ee AKF Medical Technology Co., Ltd. (halkan hoose loo yaqaan "AKF"), waxaa lagu weydiin karaa inaad bixiso macluumaad shaqsiyeed. Macluumaadkan shaqsiyadeed waxaa wadaagi kara AKF iyadoo la raacayo siyaasadan asturnaanta. Macluumaadkan shaqsiyadeed waxaa lagu dari karaa macluumaad kale waxaana loo isticmaali karaa in lagu horumariyo alaabtayada, barnaamijyadeena ama adeegyadeena, iwm.
Waa kuwan tusaalooyin qaar ka mid ah noocyada macluumaadka shakhsiga ah ee AKF ay ururin karto iyo sida aan u adeegsan karno.
Sida sharcigu qabo, waan ururin doonnaa, adeegsan doonnaa, hayn doonnaa, una bandhigi doonnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed duruufo gaar ah. Shuruudaha soo socdaa waxay sharraxayaan sida aan u ururino, u isticmaalno, u xafidno una u siideyno macluumaadkaaga shaqsiyeed.
1 、 Ururinta macluumaadka shakhsiyeed
1.1 information Macluumaadkan Shakhsiyeed ee aan u isticmaalno, u keydinno, una siino si aan kuugu siino adeegyo adiga oo abuuraya koonto, aqoonsanaya isticmaaleyaasha, ka jawaab celinta weydiimaha iyo emayllada.
Markaad sameysato koonto websaydha AKF ah, iibsato ama diiwaangeliso alaabtaada AKF, soo dejiso softiweerka AKF iyo cusbooneysiinteeda, iska diiwaangeli dukaanka tafaariiqda ee AKF mobilada ama aad kaqeyb gasho isdhexgalka kale ee shirkadda AKF, waxaan ku weydiin doonaa inaad bixiso macluumaad shakhsi ah, oo ay ku jiraan laakiin kuma koobna magacaaga, lambarka taleefankaaga, cinwaanka iimaylkaaga, iwm.
Waxaan isku dari karnaa macluumaadka aad ku soo gudbisay koontadaada iyo adeegyada kale ee AKF ama macluumaad dhinac saddexaad ah si aan kuu siino khibrad fiican oo aan ku horumarino tayada adeeggayaga.
Haddii aad ku buuxiso macluumaadkaaga shakhsiyeed meelaha kale ee furan, isticmaaleyaasha kale waxaa laga yaabaa in lagu wargeliyo macluumaadkaaga.
1.2 server adeegeena (oo uu bixiyay dhinac saddexaad) wuxuu aruurin karaa macluumaadka ku saabsan aaladda isgaarsiinta moobilkaaga, sida laakiin aan ku xaddidnayn moodeelka, aqoonsiga qalabka, cinwaanka borotokoolka internetka, waqtiga iyo goobta booqashadaada, baakadaha hagida, soo diraha iyo aqbalaha macluumaadka. (laakiin maahan macluumaadka laftiisa), iyo sidoo kale macluumaad kale oo la duubay oo leh astaamo isku mid ah si ay kuugu sahlanaato inaad booqato bogga AKF oo aad u isticmaasho waxyaabaha AKF.
Waxaan u adeegsan doonnaa cookies-ka iyo xogta hagidda sida hal-abuureyaasha kheyraadka (URL-yada) si aan u ururino marinkaaga marinka iyo taariikhda, u raadino una aragno macluumaadka, iwm.
2 information Macluumaadka shaqsiyeed adoo adeegsanaya
2.1 、 AKF wuxuu si adag u hogaansami doonaa waxyaabaha ku xusan Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuuna kugula socodsiin doonaa waqti kadib marka la cusbooneysiiyo siyaasaddan asturnaanta. Macluumaadkaaga shaqsiyadeed waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya ujeedada la go'aamiyay waqtiga ururinta. Haddii ay jirto ujeedo kale, waxaan ku weydiisan doonaa ogolaanshahaaga kahor
2.2 information Macluumaadka shaqsiyadeed ee aan ururinay waxaa loo adeegsan doonaa in lagu horumariyo adeegyadayada, alaabooyinka iyo waxyaabaha ku habboon, ogeysiisna waa laguu soo diri doonaa adiga marka ugu horeysa ee la cusbooneysiiyo lana sii daayo alaabada, barnaamijyada ama adeegyada AKF. Waxaad xaq u leedahay inaad doorato inaadan ku helin ogeysiiska noocaas ah qaab cayiman.
3 、 Shaacinta macluumaadka shakhsiyeed
3.1 Marka laga reebo shaacinta xadidan ee lagu qeexay siyaasadan asturnaanta, waxaan xafidi doonaa macluumaadkaaga qaaska ah si sax ah mana sheegi doono liiska macluumaadka macaamiisha.
3.2 here Waxaad noo fasaxaysaa inaan u siidino macluumaadkaaga shaqsiyeed cid saddexaad iyadoon lagaa helin ogolaanshahaaga xaaladaha soo socda:
3.2.1 、 Haddii aan u siideyno macluumaadkan ujeedada ah Aqoonsiga, la xiriirida ama keenista dacwad ka dhan ah tallaabo kasta oo u horseedi karta waxyeello xuquuqdeena ama hantideena, isticmaaleyaasha websaydhka ama qof kale (oo ay ku jiraan kuwa kale xuquuqdooda iyo hantidooda).
3.2.2 、 Waxaan siineynaa macluumaad shaqsiyadeed hoosaadyadayada, shirkadaha nala shaqeeya ama ganacsiyada kale ee lagu kalsoon yahay ama shaqsiyaadka si ay uga baaraandegaan macluumaadka shakhsi ahaaneed iyagoo ka wakiil ah warshadeena.
Waxaan uga baahan nahay dhinacyada kor ku xusan inay ogolaadaan inay ka shaqeeyaan macluumaadka noocaas ah iyadoo la raacayo qawaaniintayada, Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah iyo wixii kale ee quseeya sirta iyo tallaabooyinka amniga
3.2.3 、 Ujeedada baaritaanka sharciga.
3.2.4 disc Shaacinta noocan oo kale ah waxay lagama maarmaan u tahay subpoena ama qoraal kale oo sharcigu soo saaray ama naloo adeegi doono.
4 、 Amniga
4.1 、 Anaga ahaan, amniga macluumaadka shaqsiyeed waa mid aad muhiim noogu ah. Waxaan sameyn doonnaa dadaal ganacsi oo macquul ah si aan u xaqiijino amniga macluumaadkaaga shaqsiyeed isla markaana aan u dhaqan galino hanaan ganacsi oo macquul ah si loo xadido marin la'aanta, isticmaalka ama bixinta macluumaadkaaga shaqsiyeed. In kasta oo ay jiraan tallaabooyinka kor ku xusan, waa inaad la socotaa in AKF uusan si buuxda uga fogaan karin khataraha amniga ee la xiriira macluumaadka shakhsiyeed
4.2 、 Waa inaad naga caawisaa sidii aan u ilaalin lahayn macluumaadkaaga qaaska ah. Tusaale ahaan, ha shaacin lambarkaaga sirta ah. Markaad dhamaysato daalacashada bogga AKF, fadlan ka bax koontadaada.
4.3 、 Marka aad isticmaasho wax soo saarka AKF, barnaamijyada ama adeegyada ama aad ku dhajiso barxadaha isku xirka bulshada sida golayaasha AKF, macluumaadkaaga shaqsiyeed ee aad bixiso waxaa aqrin doona ama isticmaali doona isticmaaleyaasha kale. Haddii aad ku soo gudbiso macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed xaaladaha kor ku xusan, adiga ayaa mas'uul ka noqon doona cawaaqibka xun.
5 websites Websaydhada saddexaad iyo adeegyada
Wax soo saarka AKF, barnaamijyadiisa iyo adeegyadiisa waxaa laga yaabaa inay ku jiraan xiriiro ama macluumaad ku saabsan alaabada iyo adeegyada dhinac saddexaad. Wax soo saarka iyo adeegyada AKF ayaa sidoo kale adeegsan kara ama bixin kara badeecooyin ama adeegyo dhinacyada saddexaad.
Macluumaadka ay heleen qeybta saddexaad ee ka koobnaan kara asturnaanta shaqsiyadeed waxaa lagu raacayaa siyaasadda asturnaanta ee qeybta saddexaad. Waxaan kaa codsaneynaa inaad aqriso siyaasada khaaska ah ee qeybta sadexaad.
5.1 、 Markaad gujiso boggaga kale ee ku xiran degelkan, waxaad ka tagtay degelkeenna oo waxaad booqatay bogagga kale. Websaydhada kale ayaa laga yaabaa inay soo ururiyaan macluumaadkaaga shakhsiyeed ama xog aan la aqoon. Sidaa darteed, ma xakamayn karno, ma hubin karno ama kama jawaab celin karno bogagga internetka iyo waxyaabaha ku jira degelladaas. Masuul kama noqon doonno wixii khasaaro ah ee sababay ama suurtagal ah In ay sababaan degellada websaydhka saddexaad ee ku xidhan websaydhkan ururinta macluumaadka shakhsiga ah ama xog aan la aqoon iyada oo aan la oggolaan.
5.2 policy Nidaamkan asturnaanta ma khuseeyo ururinta xogta bogagga internetka dibedda ka dib markaad gujiso xiriirka.
6 Ururinta iyo adeegsiga macluumaadka shakhsiyeed ee dhalinyarada.
6.1 、 Waxaan u soo jeedineynaa caruurta yar yar ee ka yar 18 sano inay soo booqdaan websaydhka AKF oo ay soo iibsadaan alaabo iyagoo ka haysta ogolaansho iyo hagitaan masuulkooda sharciga ah.
6.2 、 ​​AKF ma isticmaali doono macluumaadka shakhsiga ah ee qaangaarka, mana u shaacin doono macluumaadkiisa la aqoonsan karo cid saddexaad. Mas'uulka ayaa xaq u leh inuu u diido AKF iyo hay'adaha la shaqeeya inay sii uruuriyaan macluumaadka shakhsiga ee xaafadda, ama uu ka codsado AKF iyo hay'adaha la shaqeeya inay tirtiraan macluumaadka shaqsiyeed ee xaafadda.
7 Wax ka beddelka Nidaamkan Khaaska ah.
7.1 、 Nidaamkan asturnaanta ayaa u oggolaanaya hagaajinta.
Adiga oo aan haysan Oggolaanshahaaga cad, kuma wiiqi doonno xuquuqdaada siyaasaddan asturnaanta.